China Venturi Vuvu-2 Umbala mveliso kunye nabathengisi | IBornun
I-Oxygen Mask yenziwe nge-mask ye-aerosol kunye ne-oxygen tubing egubungela umlomo kunye neempumlo kwaye ifakwe kwi-tank yomoya. Isigqumathelo seoksijini sisetyenziselwa ukuhambisa ioksijini yokuphefumla kwimiphunga yezigulana. Isigqumathelo seoksijini sibonisa imitya yelastiki kunye neziqwengana zempumlo ezinokuhlengahlengiswa ezenza ukuba zilunge ngokugqwesileyo kubungakanani bobuso. I-Oxygen Mask kunye neTubing iza ne-200cm yokuhambisa i-oksijini, kwaye i-vinyl ecacileyo kunye ne-soft inikeza isigulane esikhulu kwaye ivumela ukujonga okubonakalayo. I-Oxygen Mask kunye neTubing ifumaneka ngombala oluhlaza okanye obala.
1.Mask kunye umtya elastic
Iklip yempumlo ehlengahlengiswayo
3.Kunye 2m zokutyubhisha
4.oxinzelelo lweoksijini ngama-24% -50%
5. Ubungakanani: XS, S, M, L, L3, XL
I-6.100% ye-latex yasimahla, i-DEHP yasimahla iyafumaneka ngokuzikhethela.
7.Sterilized yi-EO igesi xa kufuneka.
2. Ukucoca: igesi ye-EO
3.Packing: 1 pc / PE nganye Bag, 100pcs / baseKapa
Isiqinisekiso se-4.Quality: CE, ISO 13485
Ixesha 5.Lead: ＜Iintsuku ezingama-25
6.Port: Shanghai okanye Ningbo
7.Umbala: Iyadlula okanye Luhlaza
Ubungakanani beMask yokuyalela:
I-1.Size XS, i-Infant (i-0-18 yeenyanga) imaski yobuso emile ngokwendalo yenza ukuba itywina likhuseleke lincede abazali kunye nabanonopheli benkonzo yokuhambisa amayeza e-aerosol kwiintsana.
I-2 Size S, iPediatric Elongated (1-5 iminyaka) Ismask sobuso esimile ngokwasemzimbeni senza itywina elikhuselekileyo lokunceda abazali kunye nabanonopheli abasebenzisa amayeza e-aerosol kumntwana omncinci.
3. Ubungakanani M, Umgangatho wabantwana (iminyaka emi-6 ukuya kweli-12) Imaski encinci ethe kratya iya kunika itywina elikhuselekileyo njengoko umntwana ekhula. Nceda ulawule amayeza e-aerosol kubantwana abakhohlakeleyo kwaye abangavumiyo ukusezela ii-MDIs.
4. Ubungakanani L, uMgangatho waBadala (iminyaka eli-12 +) Izikhokelo zincomela ukuba izigulana zitshintshelwe kwimveliso yomlomo kwakamsinya nje ukuba zibanakho- zihlala zi-12 leminyaka ubudala.
5. Ubungakanani be-XL, abantu abadala badityanisiwe (iminyaka eli-12 +) Izikhokelo zincomela ukuba izigulana zitshintshelwe kwimveliso yomlomo kwakamsinya nje ukuba zikwazi - zihlala zineminyaka eli-12 ubudala.
Uluhlu lobudala obungasentla lubhekisele kuphela kubume ngokubanzi
Egqithileyo Venturi Vuvu
Okulandelayo: Uxinzelelo lwe-Infusion Bag
Imaski yeOxygen engabuyiseliyo